OUKITEL K12: Taleefannada casriga ah ee cusub oo wata batteri weyn | Androidsis
OUKITEL K12: Taleefanka casriga ee cusub
Eder Ferreño | | Shiinaha Shiinaha, Mobiles
OUKITEL waxay sii wadaa balaadhinta noocyadeeda kala duwan ee telefoonada K. Calaamadda ayaa hadda inaga tegeysa xubin cusub oo isla ah, oo soo bandhigisteedu ay dhowaan dhici doonto. Waa OUKITEL K12. Sida taleefannada kale ee casriga ah ee qaybtan soo saaraha ka mid ah, ayaa ah nooc u muuqda inuu leeyahay batari weyn. Marka madax-bannaanida ayaan dhibaato ku noqon doonin taleefankan sumadda leh.
Shaashad weyn iyo batari weyn, Shaki la'aan isku darka ballanqaadka inuu ka dhigayo OUKITEL K12-kan casriga ah mid caan ka ah suuqa. Sidoo kale ma iloobi karno qiimaha weyn ee lacagta, taas oo ku badan taleefannada astaanta.
Tan iyo markii OUKITEL K12 kani wuxuu leeyahay shaashad cabirkeedu yahay 6,3 inji, oo leh xal buuxa HD +. Marka waa shaashad fiican markay tahay in laga daawado waxyaabaha ku jira. Shaashad sidoo kale isticmaasha qaddarin u dhiganta hal dhibic biyo ah, mid ka mid ah isbeddellada waaweyn ee suuqa, oo aan sidoo kale ku aragno taleefankan.
Gudaha, batteriga shaki la'aan waa barta adag. Sumadda ayaa soo gashay taleefanka batari awood leh oo ah 10.000 Mah. Sidaa darteed, is-maamulku dhibaato ma noqon doono waqti kasta. Intaa waxaa dheer, waxaa la xaqiijiyay inay durba la timid lacag deg deg ah, taas oo shaki la'aan ka dhigaysa xitaa mid raaxo leh. Is-maamul ka badan toddobaad ayaa la bixiyaa.
Sidoo kale, adoo adeegsanaya sida ugu dhakhsaha badan, waxaa suurtagal ah in lagaa qaado OUKITEL K12 illaa laba saacadood oo waqti ah. Aad u raaxo badan oo fudud mahadnaqa xeedho isku dhafan oo ay keento. Waxaa ka mid ah qeexitaankiisa kale, oo aan ilaa hadda awoodnay inaan ogaano, llega oo leh RAM 6 GB iyo 64 GB oo keyd ah oo gudaha ah. Si aan hawlo kala duwan ugu qaban karno telefoonka dhib la'aan.
Shirkadda ayaa xaqiijisay in OUKITEL K12 waxaa laga bilaabi doonaa suuqa dhamaadka bisha May ama horaanta Juun. Marka sugitaanku wuu gaaban yahay. Xaqiiqdii toddobaadyadan soo socda waxay naga tagi doonaan qeexitaanka buuxa ee qalabka. On your website waxaad kala socon kartaa taariikhda wax walba oo la xiriira astaanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OUKITEL K12: Taleefanka casriga ee cusub
Fasaxan wuxuu muujinayaa naqshadda suurtagalka ah ee Xiaomi Mi MIX 4, oo lala yaabo kamaradda
Redmi wuxuu u baahan yahay inuu wax badan ka barto Huawei, ayuu yidhi Lu Weibing